लामो रस्साकस्सीपछि जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको नेकपामा फेरी जनवर्गिय संगठन गाँठो,को कता ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
लामो रस्साकस्सीपछि जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको नेकपामा फेरी जनवर्गिय संगठन गाँठो,को कता ?
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०७६, बिहीबार
काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको नेकपामा फेरी जनवर्गिय संगठन गाँठो परेको छ । वरिष्ठ नेता माधवनेपाल अमेरिका जानुभन्दा अघि पोलिटब्यूरो सदस्यको टुंगो लागिसकेको छ । तरपनि जनवर्गिय संगठनको एकता टुंगिन सकेको छैन । १४७ पोलिटब्यूरोमा पूर्वमाओवादीबाट ६६ र पूर्व एमालेबाट ८१ जना रहने सहमति भइसकेको छ । सहमति अनुसार नै सचिवालय बैठकले पोलिटब्यूरोको टुंगो लगाएको हो । तर नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जनवर्गिय संगठनको एकता र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँडबाट गरेपछि पोलिटब्यूरोको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
पोलिटब्यूरो गठनमा नेकपाभित्रको समिकरण बदलिएको छ । पोलिटब्यूरो सदस्यमा पुष्पकमल दाहाल पक्षधर नेताहरु धेरै परेका छन् । दाहालका पक्ष ४९ केन्द्रीय सदस्यहरु पोलिटब्यूरो सदस्य बनेका छन् भने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर ३८ केन्द्रीय सदस्य पोलिटब्यूरो सदस्यमा चयन हुने भएका छन् ।
त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर ३६ जना नेताहरु पोलिटब्यूरो सदस्य बनेका छन् भने रामबहादुर थापा बादल पक्षका १०, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका ७/७ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पोलिटब्यूरो सदस्य बनेका छन् ।
पुष्पा भुसालको प्रश्न- सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेर नेकपाले कानून मिच्न मिल्छ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उल्लंघन […]
नेकपा केन्द्रीय कार्यालय सरकारी जग्गामा
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जगगा भोगाधिकार र जिलजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी […]
कुलमान र वर्षमान श्री ३ हुन् ? फोन पनि उठ्दैन, भेटघाट गर्न पनि पाइँदैन्
काठमाडौं । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उर्जामन्त्री वर्षमान […]